Rita, Writing for My Sake!: အဖြစ်အပျက်၊ ကျမ်းဂန်၊ အနှစ်သာရ နှင့် ပါရမီတော်
အဖြစ်အပျက်၊ ကျမ်းဂန်၊ အနှစ်သာရ နှင့် ပါရမီတော်
(ရှင်နာဂသိန်တေ့ာ မသိဘူးဗျ မိလိန္ဒမင်းကတော့ မြန်မာမဟုတ်၊ ကုလားမဟုတ် ဆိုတာတော့ သိပါတယ်။ သိကြား နတ်များက ဖန်ဆင်းပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကိုရာဟုစကးကိုလဲ ဒီမှာ ပြန်မေးပါရစေ။ တခြားဘာသာဝင်များ ဖတ်ရင် ရယ်ကြဦးမယ် - Anonymous ID ဖြင့် ရေးသားသည်။)
ဒါဖြင့် တခြား ဘာသာဝင်များပါ လေးစားလောက်အောင် ဒီ comment page မှာ ပြောနိုင်ရင် ကျေးဇူးတင်မှာပါ။ ပြောနိုင်ရင် ပြောသွားပါ။ ကိုယ်လဲ မှားနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်အရ မှားနိုင်သလို၊ ကိုယ် ဖတ်တဲ့ ကျမ်းဂန် စာအုပ်ကလဲ မှားနိုင်ပါသေးတယ်။ (ကိုရာဟု စကားဆိုတာလည်း သူ့အာဘော်ကို ကိုယ်က ဖြည့်စွက်ပြောထားတာ။)
ကိုယ်ကတော့ ဗုဒ္ဓဝင်ဆိုရင် အဖြစ်အပျက် အဓိက မထားဘူး။ အနှစ်သာရကသာ အဓိကပဲ။ အဖြစ်အပျက်ဆိုတာ မှတ်တမ်းတင်သူက လိုတိုးပိုလျော့ လုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေပဲ။
ဇနက္က ဘဝမှာ မဏိမေခလာကယ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊
သိဒ္ဓတ္ထဘဝမှာ သိကြားနတ်တွေက နိမိတ်ပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊
ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်နေစဉ်မှာ ပဉ္စသိင်္ခက သွယ်ဝိုက်လမ်းပြခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်
အနှစ်သာရကတော့ ပါရမီတော်တွေကြောင့်ချည်းပဲ လို့သာ မှတ်ယူပါတယ်။
(ပရိတ်ထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်းကျင့်ရင် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ထိ အကျိုးပေးတယ်။)
စာရေးသူတစ်ဦး ဆိုတဲ့ ID နဲ့ ရေးသွားတဲ့ comment ကို ပြန်ကောက်နှုတ်ချင်လို့ ကောက်နှုတ်လိုက်ပါတယ်။
ကိုယ့် post ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ အချက်တစ်ခု ဖြစ်နေလို့ ပြန်တင်ပါတယ်။
ရွတ်ရုံမျှထက် ကိုယ်လုပ်နိုင်မှ (ကိုယ်ကျင့်နိုင်မှ) ကိုယ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် စာရေးသူတစ်ဦး ID နဲ့ ရေးသူကတော့ ကိုယ့် post ကို ထောက်ပံ့ ထောက်ခံချက် ပေးတဲ့ အနေနဲ့ ရေးခဲ့တာတော့ ဟုတ်ပုံမရပါဘူး။ သူ မရည်ရွယ်ဘဲ အဲဒီအချက်က post ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ထောက်ခံလိုက်သလို ဖြစ်သွားတာ ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။
(ကိုယ့်အထင်အမြင် သက်သက်ပါ။ တကယ်ပဲ စေတနာနဲ့ ကိုယ့်ဆိုလိုရင်းကို နားလည်လို့ ထောက်ခံပြီး ရေးပေးခဲ့တာ ဆိုရင်တော့ ကျေးဇူးတင်ရင်း တောင်းပန်ပါတယ် :) )
Posted by Rita at 1/16/2010 10:20:00 AM
Labels: Discussion, Thought
မင်း နဲ့ ကိုယ်
Written Record (2)
Written Record (1)
သစ္စာနီ - သံသရာ
Poem & Me !
ပြန်တင်ချင်တဲ့ comment တစ်ခု
My Childhood Days !